ABagwebi 17 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
17 Ke kaloku kwakukho indoda kummandla weentaba wakwaEfrayim+ egama layo lalinguMika. 2 Ekuhambeni kwexesha yathi kunina: “Amaqhosha esilivere aliwaka elinekhulu awathatyathwa kuwe nowavakalisa isiqalekiso+ ngawo nowasitsho ezindlebeni zam—khangela! loo silivere ikum. Ndim owayithabathayo.”+ Unina wathi: “Makasikelelwe unyana wam nguYehova.”+ 3 Ngako oko wawabuyisela kunina+ amaqhosha esilivere aliwaka elinekhulu; waza unina wahlabela mgama wathi: “Ndimele ndiyingcwalise isilivere kuYehova iphuma esandleni sam ibe yeyonyana wam, ukuze enze umfanekiso oqingqiweyo+ nomfanekiso otyhidiweyo;+ yaye ke ndiya kuyibuyisela kuwe.” 4 Ngoko wayibuyisela isilivere kunina, kwaye unina wathabatha amaqhosha esilivere angamakhulu amabini waza wawanika umkhandi wesilivere.+ Yaye wenza umfanekiso oqingqiweyo+ nomfanekiso otyhidiweyo;+ kwaye waba sendlwini kaMika. 5 Ke yona indoda enguMika, yayinendlu yoothixo,+ yaye yenza iefodi+ nomlonde-khaya+ yaza yamisela omnye woonyana bayo,+ ukuze akhonze njengombingeleli wayo.+ 6 Ngaloo mihla kwakungekho kumkani kwaSirayeli.+ Wonke ke ubani, wayesenza oko kwakulungile kwawakhe amehlo.+ 7 Ke kaloku kwakukho umfana waseBhetelehem+ kwaYuda wentsapho yakwaYuda, yaye wayengumLevi.+ Wayehlala apho okwexesha elithile. 8 Yaye le ndoda yahamba yemka kwisixeko saseBhetelehem yakwaYuda ukuze iye kuhlala naphi na apho yayinokufumana khona indawo. Ethubeni ngoxa yayihamba yafika kummandla weentaba wakwaEfrayim ukuya kufikelela kwindlu kaMika.+ 9 Waza wathi uMika kuyo: “Uvela phi na?” Yathi kuye: “NdingumLevi waseBhetelehem yakwaYuda, kwaye ndiyokuhlala okwexeshana naphi na apho ndinokufumana khona indawo.” 10 Ngoko uMika wathi kuyo: “Hlala nam uze ukhonze njengobawo+ nombingeleli+ wam, yaye mna ndiya kukunika amaqhosha esilivere alishumi ngonyaka nesinxibo sesambatho esiqhelekileyo nesixhaso sakho.” Ngako oko umLevi wangena. 11 Ngaloo ndlela umLevi wahlala nale ndoda, waza umfana lowo waba njengomnye woonyana bakhe kuye. 12 Ngaphezu koko, uMika wamisela umLevi,+ ukuze umfana akhonze njengombingeleli+ wakhe aze aqhubeke esendlwini kaMika. 13 Ngoko ke uMika wathi: “Ngoku ndiyazi ukuba uYehova uya kundenzela okulungileyo, ngenxa yokuba umLevi uye wangumbingeleli wam.”+